Semalt: I-Imeyili yokuThengisa ngaphandle kweTeat Tech Techniques
Kubalulekile ukuba ugweme ukuwela umgca womkhwa omnyama xa kuziwa ekuthengiseni i-imeyile. Ezinye iingcali ze-SEO zibeke imigqaliselo kunye neemeko zendlela yokwenza ukuba kwenzeke, ngelixa abanye abathengisi be-SEO abathengi abakwaziyo ukuba bathathe amashishini abo kwinqanaba elilandelayo. Nazi iinqununu ezinhlanu ezinikezwa ngu-Igor Gamanenko, u-8 (Semalt Umphathi weNtuthuko yabaThengi, omele ubeke engqondweni ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho lwe-intanethi.
Kunyanzelekile ukuba ugweme i-craigslist ukuba ufuna ukufezekisa impumelelo kwi-intanethi. I-Craigslist yinjongo ekhangayo kwiingxowa ze-SEO zeentshaba kunye nabathengisi be-imeyile, kodwa baneqela labagwebi abanokukudonsa enkundleni ukuba ufunyaniswe ukuba uthinteke kwimisebenzi ethile engekho mthethweni.
Nangona unako ukuvelisa izigidi zee-akhawunti eziqinisekisiweyo kwaye uninzi lwee dilesi ze-IP, kufuneka ungalokothi uphendule i-craigslist kuba unokukunika ingxelo kwi-injini . Kufuneka ujabule ukuba uphucule isigaba sakho kwisayithi ngaphandle kokubandakanyeka kwimisebenzi ethile engekho mthethweni - hard drive repair london.
Lahla abantu abangaziwa
Umntu ongaziwayo angonakalisa igama lakho kwi-intanethi. Ngethuba lokuthengisa i-imeyile, kufuneka uqinisekise ukuba uyabakhusela kwaye uvimbele idilesi zabo ze-IP ngokukhawuleza. ii-imeyile kuba zikhona ukuze zibe ulwazi lwakho lomntu kunye nokutshabalalisa iiprojethi zakho zeendaba zoluntu.
Thatha i-offshore kwi-radar
Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba ukucela ukuba uthumele amaninzi e-imeyile kumaseva angaziwa okanye amazwe afana ne-Indiya okanye iRashiya anokudala iingxaki kuwe. Yingakho akufanele usebenzise iadesi ze-IP zala mazwe ngelixa uthumela ii-imeyili kumakhasimende akho okanye uluhlu olukhulu lwabantu. Umele uthathe i-offshore kwi-radar ngokufihla idilesi yakho ye-IP ukuze kungabikho mntu onokukukhohlisa okanye akukuthi.
Ubuphukuphuku kakhulu (VPS)
Kuhle ukusebenzisa iseva yeVPS okanye iseva ezinikezelwe ngokusekelwe kwimfuno zakho. Phantse bonke abantu abakhwebi bezoshishino kunye neentlalo, kunye nabathengisi be-digital, sebenzisa i-VPS okanye iinkonzo ezinikezelweyo ngeli thumela i-imeyile ngezizathu zokuphromotha. Ukuba ungomnye wabo, akufanele ubandakanyeke ekuthengiseni i-email ye-hat hat njengoko kuza kudala iingxaki kuwe nakwi shishini lakho kwi-intanethi.
Akufanele uze ukhohlwe ukuba ukuthengiswa kwe-imeythi ye-black hat isebenza kuphela iintsuku ezimbalwa. Kodwa kunye nalo, awukwazi ukuvelisa nayiphi na inkohlakalo kwaye awukwazi ukufumana ezininzi kwi-intanethi yakho. Amashishini omatshini amatshini amatshini okuthengisa azange athembeke kwaye akaqinisekanga ngempumelelo. Yingakho kufuneka uhlawule ngokugqithiseleyo ukuthengwa kwee-white hat kunye nezentlalo zentlalo. Kuya kuthatha ixesha elithile, kodwa iziphumo ziyinto emangalisayo kwaye kubomi bonke. Kuzo zombini amashishini amancinci namakhulu, kunyanzelekile ukuba ukhethe amacandelo amhlophe, kwaye akufanele uwele umgca wentambo emnyama ukuba awufuni ukufunyanwa kwi-intanethi.